रियल मड्रिन जान लागेका नेइमारलाई रोक्न सक्लान् त मेसीले ? के मेसी, नेइमार र सुआरेजलाई फेरी बार्सिलोनामा देख्न पाइएला ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
रियल मड्रिन जान लागेका नेइमारलाई रोक्न सक्लान् त मेसीले ? के मेसी, नेइमार र सुआरेजलाई फेरी बार्सिलोनामा देख्न पाइएला ?
एजेन्सी । बार्सिलोनाका कप्तान लियोनेल मेसी, येइमार र सुआरेजको खेल जोडी गज्जब जमेका बेला नेइमार बार्सिलोना छाडेर पिएसजी गएपछि न त मेसीले राम्रो प्रदृशन गरे न त नेइमारले ठूलो उपलब्धि नै हाँसिल गरे । मेस्सी बार्सिलोनाका कप्तान मात्र होइनन् ।
उनको भूमिका त्यो भन्दा बढी देखिएका विभिन्न उदाहरणहरु छन् । तत्कालिन समयमा मेस्सीको साथमा खेलेरै नेइमारले फुटबलमा धेरै नयाँ कुराहरु पनि सिक्दै जुन उपलब्धी हासिल गरेका थिए त्यो पिएसजीमा गएर हासिल गर्न सकेका छैनन् । २ वर्षअघि नेइमार जाने बेला मेस्सीले उनलाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेका थिए ।
उनी गइसकेपछि पनि मेस्सीले नेइमार बार्सिलोना फर्कन पाउँदा खुसी हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । यतिबेला नेइमार रियल मड्रिड जाने चर्चा चलेका बेला मेसीले आफ्नै पूरानै घर फर्काउन पनि हर प्रयास गरिरहेका छन् । बार्सिलोना र रियल मड्रिड दुवै ब्राजिलियन फरवार्ड नेइमारलाई अनुबन्ध गर्न प्रयासरत रहेका बेला लियोनेल मेस्सी यस विषयमा निर्णायक भूमिकामा पुगेका छन् । मेस्सी र नेइमारबीच आत्मीय सम्बन्ध छ ।
यी दुईसँगै लुइस सुआरेजसमेत विभिन्न समयमा रमाइलो गरिरहेका देखिन्छन् । पछिल्लो समय मेस्सीले नेइमारलाई रियलको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सुझाव दिएका खबरहरु पनि एक पछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । के मेसी, नेइमार र सुआरेजलाई फेरी बार्सिलोनामा देख्न पाइएला त ? त्यो भने केही समयमा नै थाहा लाग्नेछ ।